ब्लग Archives - Followkarnali
सरकारी वेबसाइटका दुर्दशा
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, भदौ ५, २०७७ |
स्थानीय सरकारले हरेक असार १० गते नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । बजेट वार्षिक आय र व्ययको विवरण मात्रै होइन सरकारको नीति, योजना र उद्देश्यहरूको दस्तावेज पनि हो । जनताको सबैभन्दा नजिक स्थानीय सरकार छन् । उनीहरूले गर्ने हरेक कार्य प्रत्यक्ष रूपमा त्यस क्षेत्रभित्रका नागरिकसँग जोडिएको हुन्छ । नागरिकका सपनाको सम्बोधन पनि बजेटमार्फत गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर निर्धारित समयावधिभन्दा एक
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, साउन २७, २०७७ |
यही असार २४ गते पारित कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा सांसदहरूको लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच करोडको दरले विनियोजन गरियो । यसभन्दा अगाडि बजेट पारित हुन कठिन भएको तर सांसदहरूको लागि विनियोजन हुनासाथ सहजै बजेट पारित भएको भनेर समाचार प्रकाशित भए । गत आर्थिक वर्षमा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको थियो । समग्रमा सांसदहरूले आफ्नो राजीखुशीले खर्च गर्न सक्न
मन्दिरको दान, किन आएन काम ?
जब मानिसमाथि कुनै सङ्कट आइपर्छ उसले सुरुमै सम्झने एक वाक्य हो–भगवान मेरो रक्षा गर । भगवानले रक्षा गरून या नगरुन् यसैको हामीले मन्दिरको रक्षा भने जरुर गरिहाल्छौँ । खल्तीमा होस् या ऋण काढेर नै भएपनि हामीले मन्दिरको दान पेटीमा पैसा चढाएरै छोड्छौँ । तर हामी कहिल्यै सोच्दैनौ कि त्यो पैसा कहाँ जान्छ । के साँच्ची हामीले दान गरेको पैसा सिधै भगवानको खातामा पुग्छ त ? पुग्छ भने हामीलाई भौचर चाहिँ किन दिँदैनन
अलपत्र ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’
कर्णाली प्रदेशको राजधानी हो, वीरेन्द्रनगर । यहाँ अचेल बिजुली निकै चम्किरहन्छ । तर मेघ गर्जेर भने हैन । झ्याप्प–झ्याप्प विद्युत आउने–जाने गरेर । कोभिड–१९ को त्रासले प्रविधिको सदुपयोग गर्दै गरिएका भर्चूअल संवाद, बैठक र तालिमहरूलाई बाधा गरिरहेको छ यहाँको विद्युतले । दैनिक दर्जनौं पटकसम्म आउने–जाने गरिरहन्छ । यो दृष्टान्त हो प्रदेश राजधानी अझ भनौं डिजिटल कर्णालीको । अनियमित लोडसेडिङले नागरिकले
बत्ती हो कि जुनकिरी !
सुर्खेतमा हिजोआज एउटा नयाँ गाउँखाने कथा प्रचलित छ । तर यो कुनै स्वैरकाल्पनिक कथा भने होइन । दैनिक जीवनयापनमा भोग्नुपरिरहेको यथार्थ हो । कथा हो, ‘आयो–गयो, आयो–गयो झ्याप्प के हो ?’ सुर्खेतमा बस्ने जो–कोहीले पनि यो कथा सुन्ने बित्तिकै केही नसोचेरै उत्तर भनिहाल्छ ‘बत्ती ।’ किनभने हरेक दिन यही बत्तीको आउने–जाने अनिश्चित तालिकाले यहाँका हरेक नागरिकलाई सताएको छ । दुःख दिएको छ । साँझपख आकाशमा जुनक
सार्वजनिक नीति बहस किन ?
विषय प्रवेश नीति भन्नाले नियम, कानुन वा पालना गर्नुपर्ने कुरा भन्ने बुझिन्छ । नीति व्यक्तिगत जीवन, घर, परिवार, समाज हुँदै मुलुक र विश्वलाई नै व्यवस्थित गर्ने औजार हो । नीति वा नियमविना कुनै कुरा नियमित गर्न सकिंदैन । हाल स्थापित विभिन्न पद्धतिहरू नीतिकै उपज हुन् । यद्यपि नीति गतिशील हुन्छ । समय सापेक्ष हुन्छ । नीतिका विभिन्न क्षेत्र छन् । सार्वजनिक नीति सार्वजनिक सरोकारका विषयसँग सम्बन्धित
सन् २०१७ को सुरुवातमा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामाले आफ्नो दोश्रो कार्यकालको विदाई कार्यक्रममा दिएको भाषणमा भनेका छन् , “हो, हाम्रो प्रगति सामान्य छैन् । लोकतन्त्र कार्यान्वयन सधैँ अप्ठ्यारो काम हो । लोकतन्त्र सधैँ विवादपुर्ण पनि हुन्छ । कहिलेकाँहि यो हिंस्रक पनि हुन्छ । हरेक दुई कदम अगाडी बढ्दा एक कदम पछाडी फर्कनुपर्ने पनि हुन्छ ।” उनको यो भनाईबाट पनि वुझ्न सकिन्छ कि लोकतन्त्र सजिलो
मुख्यमन्त्रीलाई ४ प्रश्न
प्रकाशित मितिः बुधबार, बैशाख ४, २०७६ |
शासकहरू जहिले पनि प्रश्नबाट भाग्छन्, डराउँछन्, थाम थुम पार्ने प्रयास गर्छन्, र उनीहरूको भाषामा ‘म्यानेज’ गर्न तम्सिछन् । अर्थात शासकहरू प्रश्न मन पराउँदैनन् । तर लोकतन्त्रमा शासकलाई प्रश्न गर्न पाइन्छ, गर्नुपर्छ र गरिरहनुपर्छ । मेरो प्रदेशको नेतृत्व सम्हालिरहेका यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग पनि मेरा केहि प्रश्न छन्, ४ प्रश्न । मुख्यमन्त्री ज्यू ! २०७४ फागुन ३ गते तपाइलाइ